BAAHIDA AY U QABAAN WAXBARASHADA DHALLAANKA SOOMAALIYEED EE KU NOOL DALALKA QURBAHA
Markuu burburay qarankii ummadda soomaaliyeed, waxaa adkaatay in ubadka soomaaliyeed, helo waxbarasho, waxayna intoodii badnayd u soo haajireen dalalka dibadaha.
markii arintaasi dhacday ayaa waxaa dhacay in dhallaankii soomaaliyeed intoodii badnayd loo diro dugsiyadii dalalkii ay ka heleen qaabilaada waxaana halkaas uga bilaawday jadwal cusub oo la dhihi karo wuxuu u horseeday dib u laabad dhinaca nidaamkii xornimo u dirirkii ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba, waxaan maqaalkani uga hadlayaa sidii meel looga soo wada jeesan lahaa horumarinta dhallaanka Soomaalieed ee ku dhaqan dalalka dibadaha.
Saamaynta dhaqanka iyo lahjaddu ku yeelan karaan barashada xisaabta iyo guud ahaan cilmiga ayaa ah arrin aad u muhiim ah oo inbadan laga faalooday. Waxaa qaddarin mudan in laga fiirsado, gaar ahaan, abuurka erayo cusub iyo isticmaalkooda, iyadoo la is waydiinayo dulucda ay xambaarsan yihiin ereyadaasi iyo sida loo fasiran karo luuqadda caadiga ee suuqa lagaga hadlo. Hubaal waxa ah in wax ku dhigista iyo wax ku barashada afka hooyo uu ka wanaagsan yahay kan qalaad. Iyadoo taasi jirto ayaa hadana marka lahjadi ay ku jirto xaalad bilow ah, sida ``eray-cilmiyeedka af-soomaaliga’’, ay tahay in laga digtoonaado doorashada eray-cilmiyeedyo cusub iyo dhisidda weedho yeelan kara macno hufan oo aan keenin ismaandhaaf.
Luuqad hor-u-markeedu waxa uu ku salysan yahay heerka nolosha iyo dhaqanka dadka ku hadla luuqaddaas, islamarkaana, heerka iyo nooca dhaqan-dhaqaale ee bulshadaasi ay u nooshahay ayaa seesa ama kooba eraybixinta iyo qaamuuska afkooda. Tusaale ahaan, afka soomaaligu waa mid ku qani ah marka loo eego nolosha dadyowga geeska afrika degganaa oo ku ekayd heer xoolo-dhaqato iyo beeralay ilaa qarnigan horraantiisii. Midda kale luuqadda soomaaligu waxa ay ka soo jeeddaa suugaan aad u xeel dheer iyo aftahanimo ay lahaayeen gabayaaga soomaalidu.
Dhaqanka reer-guuraanimadu waxa uu aad u adkeeyey raadraaca iyo helitaanka xaqiiqooyin ku saabsan taariikhda dhabta ah ee dadka ku nool Geeska Afrika. Gaar ahaan Soomaalidu waxay ay ahayd ummad aan lahayn degaan rasmi ah, sidaa darteed way adag tahay sida loo helo hanti raagta oo ay ka tageen dadkii hore (sida qalab farsamo, maacuun, farshaxan, imw.); hantidaasi oo wax wayn ka tari lahayd in dib loo dhiso, waxna laga ogaado, hab nololeedkii iyo dhaqameedkii hore ee reer guuraagii ku noolaa bariga iyo geeska Afrika.
Afka soomaaliga, sida dhammaan hiddeha iyo dhaqanka dadka ku hadlaa ay ku dhisnaayeen, waxa la isugu soo gudbinaayay kaliya dhawaq ahaan iyo xasuus uu facba faca ka danbeeya u dhiibaayey. Ma ay jirin qoraallo lagu kaydiyo suugaanta iyo aqoonta ay dhaqanka u lahaayeen soomaalidu, mana ay jirin far u gaar ah afka soomaaliga oo qorani. Taasi waxa ay sababtay in ay xikmad iyo cilmi-dhaqameedka ummadda soomaalidu — tusaale ahaan xiddigiska iyo daawaynta daka iyo xoolaha — uu in badan lumay oo aanu lahayn tixraac iyo kaydin toona.
Waxaa xusid mudan sida uu Muuse Ismail Galaal uga cudurdaartey dhibka lagala kulmi karo raadinta iyo ururinta waxa uu ku magacaabay "Bush Science". [Eeg. 4]. Muuse waxa uu isku taxalujiyey in uu u kuur galo habka xidigiska ee dhaqan soomaaliga, waxaana uu isku dayay in uu si cilmi casri ah ugu sharxo. Isagoo ka hadlaaya dhibaatooyinka u gaarka ah cilmibaadhista noocan oo kale ah, wuxuu yidhi "In trying to set down what I have learned of Somali weather lore I have become aware of many difficulties, and the complexity and uniqueness of the subject is one of them. But more than this, the fact that the beliefs and practices are unwritten, and handed down from generation to generation of scattered group of nomads, and differ somewhat with each group in the oral exposition of them, makes it extremely difficult to offer a comprehensive and consistent statement of what is generally held. It is moreover no easy task to explain this unwritten "Bush Science" in manner acceptable both to the culture one and a quite different scientific outlook. And finally I realised that it is one thing to have a grasp of an elusive subject such as this in one’s mind and in one’s tradition, and another thing to be able to explain it lucidly on argument and in writing."
Inkasta oo ay jireen habab qoraal ee farta soomaaliga lagasoo bilaabo qarnigan horraantiisii, hadana hababkaasi waxa ay ahaayeen kuwo ay shaqsiyaad gaar ah ama kooxo koobani isticmaali jireen. Afka Soomaaliga waxaa markii u horreysay loo dhaqan galiyey in wax lagu barto horraantii toddobaatameeyadii, kadib markii la isku raacay in wax lagu qoro afka soomaaliga, iyada oo la adeegsanayo xarfaha laatiinka. Sidaa darteed waxaa la odhan karaa cilmiga soomaaliga ah ee qoran waxa uu bilaabmay labaataneeyo sano ka hor.
Guddi isugu jira aqoonyahano cilmiyada sayniska iyo afafka, ayaa loo xilsaaray inay dejiyaan eraybixin mideysan oo loo adeegsado laamaha waxbarasho ee kala duwan.
Shaki kuma jiro qiimaha dhaxalgalka ah ee howshii ay qabteen gudigii eray-bixintu sanadihii 1970-75, gaar ahaan xagga xisaabta. Waxa ay muddo yar ku dhiseen sal muhiim ah, iyaga oo ku guulaystey in ay af-soomaaliyeeyaan waxbarashada dugsiyada hoose-dhexe, islamarkaana diyaariyeen buugta waxbarasho iyo barekaaliyeyaalba. Sannad kadibna waxa ay qoreen buugta dugsiyada sare oo waafaqsan manhaj cusub oo loo dajiyey heerka waxbarasho ee dalka.
Afka cilmigu wuxuu u baahan yahay erayo iyo lahjad u gaar ah, waayo ugu horrayn muhiimaddiisu waa inuu soo bandhigo fikrado aan ku qeexnayn luuqadda suuqa lagaga hadlo, amase fikrado leh macno hoose oo ka duwan kan loo fahmo sida caadiga ah, kuna saabsan xaalladda markaas laga hadlayo. Laamaha cilmigu, gaar ahaan xisaabtu, waxa ay u baahan tahay in kalmad kastaa ay yeelato manco hufan, qeexan oo aan maldahnayn. Waxa kale oo xisaabtu u baahan tahay erayo iyo weedho gaar ah oo lagu muujiyo fikrado dahsoon (abstract notions), kuwaas oo khaas ahaan ka hadlaaya aragtiyo dahsoon (abstract concepts): tusaale ahaan bar (point), xariiq (line), bed (area), laxaad (dimension), iwm. Saddex siyood ayaa lagu gaadhi karaa yoolkaas: (i) iyada oo la isticmaalo erayo ka mid ah luuqadda caadiga ah, balse macnohooda si cilmiyeysan lo qeexo, qeexdaas oo madi ah, (ii) iyada la abuuro erayo cusub oo aan hore u jirin oo lagu magacaabo fikradaha xisaabeed ee laga hadlayo iyo (iii) in laga soo ammaanaysto erayo luuqadaha kale. Sikastaba ha ahaatee, waxa aan shaki ku jirin in waqti aad u dheer loo baahan yahay si ay u dhisanto lahjad cilmiyeed hufan.
Manhajna si uu u noqdo mid taabagala, waxa uu u baahan yahay in hore laga ogaado luuqadda uu ku salaysan yahay; waa in ka hor inta aan la dhaqan galin manhajka cusub, la diyaariyo qalab (sida buug, qaamuus cilmiyeedyo, barekalkaaliyeyaal, iwm) iyo xirfadleyaal (sida bareyaal, maamul, iwm) wax ku bari kara luuqaddaas. Maamul kasta oo tacliimeed, haddii aanu lahayn siyaasad xooggan oo xilli dheer ku salaysan ee xagga luuqadda wax lagu baranayo (strong long-term language policy), waxa uu u halis yahay dhibaatooyin badan oo is hortaagaya koritaanka tayada waxbarashadiisa. Waxa uu luminayaa xoog iyo waqti badan si uu u diyaariyo qalab waxbarasho, isla markaana u siiyo fursdad luuqadeed oo ay ardeydu kusii wadan karaan waxbarashadooda.
Yaraanta waqtiga ay guddiga afsoomaaligu ku dejisay ``eraybixinta cilmiga’’, iyo la’aanshaha waayaragnimo iyo waliba maqnaashaha cilmibaadhis ku habboon howshan ayaa abuuray goldoloolooyin badan oo qiime ridey in wax lagu barto afsoomaaliga. Taas oo lagu darey tayo xumida sanadihii danbe ku dhacdey hor-u-socodka waddanka, gaar ahaan xagga waxbarashada, waxay niyad jab ku riddey abaabulayaashii qorista iyo horumarinta afsoomaliga, waxayna sababtey in aanay hawshaasi helin dayactir ku habboon.
Goldaloolooyinka manhajka waxbarashada ee dugsiyada somaaliya, intii u dhaxaysay 1970kii ilaa dhammaadkii siddeetameeyada, kuma ekayn kaliya xagga luuqadda. Gaar ahaan muqarrarka xisaabta ee loo dejiyey dugsiyada dhexe iyo sare ma uu ahayn mid ku habboon heerka aqooneed ee laga filayey ardeydu inay gaadhaan, kadib marka ay dhammeeyaan iskuulada.
Hadaba, maadaama ay luuqadda wax lagu baranayaa aad u saamaynayso ardeyda fahankooda, salna u tahay dhuuxidda fikradaha xisaabeed ee ay weedhkastaa xambaarsan tahay, waxaa lama huraan ah in dib loo eego eraybixinta af soomaaliga, lana dhiiri galiyo qoraal badan oo soomaali ah. Taasi waxay fududaynaysaa in af-cilmiyeedka da’da yar ee af-soomaaligu u helo fursad uu ku dhex galo luuqadda caadiga ah, kana madax banaanaado in uu ku koobnaado dugsiyada iyo goobaha waxbarashada oo kaliya.
Haddaba, waxaan dhammaan aqoonyahannada Soomaaliyeed ka codasanayaa si ay guntida dhiisha isaga dhigi lahaayeen una soo jeestaan sidii dhallaanka soomaaliyeed loo gaarsii lahaa horumar dhinaca aqoonta afkooda hooyo loona baro si cilmiyeysan.
fadlan haddi aad doonayso in aad la soo xirirto webkaan.
rix halkan horumar@hotmail.com
Hadii aad doonayso in aad lasooxarirto webka
Halkaan noogu soo dir wixii warbixin ah